China Ukubamba iimagnethi zokuSasaza iiAnchors ukubeka kunye nokulungisa abavelisi kunye nabathengisi | Meiko Magnetics
Inkqubo ye- iimagnethi ezibambesebenzela ukubeka endaweni kunye nokulungisa ukusasaza iiankile zokunyusa ngensimbi formwork. Iirandi ezimbini ezisikiweyo zijijelwe kumzimba weplate kazibuthe, ukwenza isiseko serabha kube lula xa ufaka. Ngenxa yokudityaniswa kwe-6pcs okanye i-8pcs kwinqanaba eliphezuluNeodymium disc iimagnethi, Inokuncamathisela ifomwork yentsimbi ngokuqinileyo. Kulula kakhulu ukuyibeka kwaye uyihambise naphina into oyifunayo kwaye uyikhulule emva kokubumba.
Olu hlobo lokusasaza iiankile zangaphambili zeemagnethi zisetyenziswa ngokudibeneyo nesiseko serabha ukugcina ii-anchors zisendaweni.Sigcwaliswe ngeenkcukacha njengeL144x64mm (100KG) ye-2.5t anchor, L144x64mm (100KG) ye-5.0t, L220x100mm (170KG) ye-10.0t. Olunye ubungakanani kunye namandla ombane ziyafumaneka ukuvelisa njengoko ubucelile.
Chwetheza L (mm) W (mm) H (mm) Umkhosi (KG)
Egqithileyo Isiphathi seMagnetic Magnetic kunye nePin eguqukayo yePin yokuLungisa iSocket Magnet D65x10mm
Okulandelayo: Ibha yentsimbi yentsimbi yokukhupha i-Push / Pull Magnets
Ukubamba iimagnethi zokuSasaza i-Anchor
Ukuphakamisa i-Anchor Magnet
Isibambiso se-Anchor Magnetic
Ipleyiti yokuLungisa iMagnetic yokuSasaza i-Anchor
Umgcini weMagnetic for Anchor yokusasaza
Ukusasaza i-Anchor Magnet
Ukusasaza i-Anchor Magnetic Recess yangaphambili